Pedro Rodriguez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Pedro Rodriguez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; 'Fududeeyaha'. Dabeecadeena Pedro Rodriguez oo ah akhbaar aan sax aheyn Xaqiiqooyin ayaa kuugu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa, hase yeeshee dad badan ayaa ka fikiraya Pedro Rodreguez Biography oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
Pedro Rodriguez Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore
Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma wuxuu ku dhashay maalinta 28th ee July 1987 ee Santa Cruz de Tenerife, Spain by hooyadiis, Monserrat Ledesma Encinoso iyo aabihiis, Juan Antonio Rodríguez Pedro.
Pedro waa cunugga kaliya ee waalidkiis. Waxa uu ahaa waligaha noocaan oo kale ah.
Pedro si fiican ayuu u tababaray wuxuuna xiriir dhow la lahaa waalidiinta. Inay noqdaan kuwo si fiican u qalabeeya iskuulada iyo isboortiska ayaa bilaw weyn u ah nolosha dhalinyarada. Waxa uu helay isku dheelitirka ugu fiican ee u dhexeeya akhrinta buugiisa iyo kubada cagta oo la saaxiibo.
Pedro ayaa ku soo bilowday xilli ciyaareedka dambe ee kubada cagta (16). Xirfadlaha dhalinyaradiisu wuxuu bilaabay 2003 markii ugu horreysay ee uu ku biiray akadeemiyadda San Isidro halkaasoo uu ka ciyaaray ilaa 2004.
2004, wuxuu helay dareenka ah FC Akadamiyadda Barcelona. Pedro ayaa dhameystiray maxkamadeynta kooxda, ka dibna waxaa lagu casuumay inuu ku biiro akadeemiga kooxda Catalan. Waxa uu sii waday waxbarashadiisa akadeemiga waxaana uu u ciyaaray kooxda dhalinyarada kooxda ilaa 2005.
Sannadkii la soo dhaafay 2005 ayaa si wacan u soo maray isaga oo loo soo bandhigay heshiis qandaraas ah oo uu saxiixay iyo boos seddexaad oo kooxda ka tirsan. Intii u dhaxeysay 2005-2007, Pedro Rodríguez ayaa ka mid noqday ciyaartoyda seddexaad ee kooxda.
Ciyaartoyda da'da yar ee reer Spain ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay isaga oo u ciyaara kooxda labaad ee kooxda oo ka bilaabay 2007 halkaasoo uu dhaliyey goolal badan.
2009 / 2010, Pedro ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee taariikhda goolal dhaliya lix tartan oo kala duwan oo sanadle ah, hal rikoor oo kaliya ayaa isku dheelitiray Lionel Messi oo sameeyay 2011.
Wadar ahaan, Pedro wuxuu ciyaaray kulamadii rasmiga ahaa ee 321 ee kooxda koowaad ee Barcelona, ​​isagoo dhaliyey goolal 99, islamarkaana uu caawiyay 46 ka caawisay inay ka badan tahay 50% (25) oo ku biiray Messi.
Inta kale ee ay tiri, hadda waa taariikh.
Pedro Rodriguez Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Qoyska
Pedro hooyadii, Monserrat Ledesma Encinoso iyo aabe, Juan Antonio Rodríguez wax war ah kama hayo shakhsiyaddooda internetka.
Warbixin ka timid ilo lagu qadarin karo si kastaba ha ahaatee waxay muujinayaan in ay ku nool yihiin xeebta Spanish ee Santa Cruz de Tenerife oo loo arko in ay tahay magaalada dabiiciga ah.
Waxay sameeyeen intii karaankoodii ugu fiicneyd si ay wiilkooda ugu soo qaadaan habka ugu wanaagsan ee suurtagal ah, taas oo bixisay. Pedro wuxuu waalidiintiisa siinayaa wax walba oo ay u baahan yihiin.
Pedro Rodriguez Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Pedro's Love Life waa istaahilaa soo saarista. Waxa uu ku sheegay in Martin Martin oo ah xisaabiye iyo waxaa la sheegay inuu yahay 5 sano ka weyn isaga. Waxay kulmeen markii Pedro uu ahaa 17. Waqtigaas, Carolina wuxuu ahaa 22.
Pedro Rodriguez Sheeko jecel
Si ka duwan ciyaartoyda kale ee saaxiibtinimo, Pedro ayaa ka fogeynayay qadka dhexe sababo fiican. Shimbiraha jacaylka labadaba waxay is guursadeen sanadka 2005 ka dib markii ay aad u yaraayeen. Hoos waxaa ku qoran sawiro muujinaya ururkooda.
Fiiri sawirkaan balaaran ee hoose. Waxay u muuqdaan kuwo qurux badan oo ay la socdaan gaarigooda.
Hoos waxaa ku qoran lamaanaha ku jira muraayadaha qashinka ee Bodega Iniesta oo ay leedahay saaxiibka Pedro ee saaxiibtinimo iyo saaxiibkiisii ​​hore ee Barcelona, Andres Iniesta.
Waxay go'aansadeen in ay joogaan sanadada 8 kahor intaan ilmahooda la siin. Lamaanayaashu waxay heysteen wiilkooda ugu horeeyay, Bryan Rodriguez Martin on 4th April 2013.
Pedro Rodriguez qoyskiisa
Martin Martin waa mid aad u jecel isla markaana qaadanaaya xannaaneyn aad u wanaagsan ninkeeda. Pedro nafsaddiisu waa ninkoo jecel oo masuul ka ah qoyskiisa. Waxa kale oo uu ku lug leeyahay wax kasta oo wax ku ool ah. Noloshiisa miyirka ayaa runtii ah guul weyn. Mar labaad, waxay u muuqdaan kuwo qurux badan
Pedro Rodriguez iyo xaaskiisa, Martin Martin
Xiriirkooda waxay ku xiran tahay jacayl, kalsooni iyo faham wadajir ah. Sidaa darteed, marnaba uma maleynin inay kala tagsan yihiin ama furi. Waa arrin ku habboon in la ogaado in Martin Martin la yiraahdo inuu yahay mid aad ugu dhow Daniella Semaan oo ah xaaska Cesc Fabregas sida waqtiga qoraalka ah.
Sida dadku u qiimeeyaan Pedro's xiriirka guurka aan kala go 'laheeyn, ayaa sidoo kale la sheegi karaa Radamel Falcao, Nemanja Matic, si ka duwan, Edinson Cavani iyo Adriano kuwaas oo noloshooda guurka loo calaamadiyo arrimaha guurka iyo muranka.
Pedro Rodriguez Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaano -Naadiga Carruurta Qoyska ayaa Badbaadiyey
Naadiga Pedro, San Isidro ayaa laga soo badbaadiyay kacdoonkii uu ugu biiray Pedro Chelsea.
Kooxda reer Spain ee heerka afaraad ee Tenerife ayaa 420,000 ka heshay ciyaaryahanka ciyaaryahanka Chelsea, oo ah lacag ka badan afar jeer miisaaniyadooda sannadlaha ah (€ 85,000).
Pedro waxa uu ahaa ciyaaryahanka u dhashay Spain ee 10thi ee abid ugu ciyaara kooxda Chelsea ee Premier League.
Pedro Rodriguez Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaano -Xoog iyo Tabaryar
Wuxuu isticmaalaa labadiisa lugood ee ciyaarta, taas oo u xaqiijisay inuu u ciyaari karo labada dhinacba.
Waxa uu ku fiican yahay xirfad xariif ah. Waxa uu xakameyn karaa kubada kubada cagta. Waxa uu helay xiise weyn iyo xirfad isaga oo u horseeday inuu noqdo mid cajiib ah oo uu ku qanacsan yahay xawaaraha iyo meeleynta mudo dheer iyo gaaban.
Tababare Pedro waa jilicsanaanta xirfadiisa.
Fernando Torres Hooyo sheeko xeel dheer